ILactoferrin (LF), ekwabizwa ngokuba yi-lactotransferrin (LTF), yiglycoprotein emelwe ngokubanzi kulwelo oluyimfihlo oluquka ……
I-Lactoferrin yinxalenye yenkqubo yomzimba yokuzikhusela kwaye ine-antimicrobial activity. Ukongeza kwimisebenzi ephambili yokudibanisa kunye nokuhambisa isinyithi, i-Lactoferrin ikwanemisebenzi kunye neempawu zentsimbi ye-antibacterial, i-antivirus, ukumelana ne-parasites, i-catalysis, ukuthintela umhlaza kunye nokulwa umhlaza, i-allergies kunye nokukhuselwa kwemitha. Abanye abantu bathatha izongezo ze-lactoferrin ukufumana izibonelelo ze-antioxidant kunye ne-anti-inflammatory.
I-Lactoferrin powder ikhuselekile kwimali esetyenziswe ekutyeni. Ukutya izixa eziphezulu ze-lactoferrin kubisi lwenkomo kunokuba kukhuselekile ukuya kuthi ga kunyaka. I-lactoferrin yomntu eyenziwe ngerayisi eyenziwe ngokukodwa ibonakala ikhuselekile ukuya kwiintsuku ezili-14. I-Lactoferrin inokubangela urhudo. Kwiidosi eziphezulu kakhulu, irhashalala, ukungabinamdla wokutya, ukudinwa, ukugodola kunye nokuqhinwa kuye kwaxelwa.
I-Lauterbach R et al., Lactoferrin -iglycoprotein yamandla amakhulu onyango, ixesha le-Dev Med. Ngo-2016 ngoMatshi-Juni; 20 (2): 118-25.